Media Report - ISP Myanmar China Desk
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထုတ်ဝေနေသော နေ့စဉ်သတင်းစာများ၊ အပတ်စဉ်ဂျာနယ်များနှင့် နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများတွင် တင်ပြသော တရုတ်-မြန်မာဆက်ဆံရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ သုံးသပ်ချက်များသည် မျက်မှောက်ခေတ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို တစ်စုံတစ်ရာ ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြသည့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေများ၊ သတင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်များ၊ အစိုးရနှင့် သံရုံးများ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအား တစ်နေရာတည်းတွင် ရရှိနိုင်ရန် စုစည်းတင်ပြပေးထားပါသည်။ သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ထုတ်ပြန်ချက်များဟု အမျိုးအစားခွဲခြားထား၍လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေး၊ လူမှုရေး စသည်ဖြင့် ကဏ္ဍများ ခွဲထား၍လည်းကောင်း မိမိလေ့လာလိုသော ကဏ္ဍနှင့် သတင်းအမျိုးအစားများအား လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရန် ဖော်ပြထားပါသည်။
တရုတ်-မြန်မာလမ်းကြောင်းအသစ် (တရုတ်ချုံချင့်-တရုတ်လင်ချမ်း-မြန်မာ) စတင်ဖွင့်လှစ်ပြေးဆွဲ
မေလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် တရုတ်-မြန်မာလမ်းကြောင်းအသစ် (တရုတ်ချုံချင့်-တရုတ်လင်ချမ်း-မြန်မာ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားတွဲသည် တရုတ်နိုင်ငံ ချုံချင့်ကော်ယွမ်ဆိပ်ကမ်း ယူကြိုဘူတာရုံမှ စတင်ထွက်ခွာခဲ့သည်။ Read more...
Myanmar Now, Khin Yi Yi Zaw, News
Two of five locals abducted by junta forces in southern Sagaing Region’s Yinmabin and Salingyi townships were found murdered on Wednesday evening. The deceased men were Read more...
China and Russia have blocked the UN Security Council from issuingastatement expressing concern at the violence and serious humanitarian situation in Myanmar and the “limited progress” Read more...
China Xinhua News, News
လန်ချန်း-မဲခေါင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အထူးရန်ပုံငွေ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ မဲခေါင်မြစ် ဝမ်ပုံဆိပ်ကမ်း တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရေး ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု” (The Feasibility Study on Myanmar Wan Pong Port Improvement Project) ကို Read more...
RFA Burmese, News
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် မူဆယ် ကျင်စန်းကျော့ဂိတ်ကတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကို သစ်သီးတင်ပို့နေတဲ့ ကုန်ကားတွေကို တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်က ကိုဗစ်ရောဂါ စည်းမျဉ်းတွေ ဖြေလျှော့ပေးလိုက်တယ်လို့ မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သည်အချို့က RFA ကို ပြောပါတယ်။ Read more...
Global Times, News
China donates 10m doses of COVID-19 vaccine, 13m syringes,2mobile laboratory vehicles to Myanmar
China has donated 10 million doses of COVID-19 vaccines along with 13 million COVID-19 vaccine syringes and two mobile laboratory vehicles to Myanmar, according toastatement from Read more...